breaking news | San Oo Aung's Weblog
Myanmar Junta No2Maung Aye arrested (unconfirmed news in English & Burmese)
ငသန်းေ ရွှက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးကို ဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိ။
ဇွန် ၁၅ ( နေပြည်တော်)ငသန်းရွှေ က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးကိုလက်ဦးမှုယူပြီးဖမ်းဆီးလို်က်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း က ဒီနေ့ မနက်မှာ နေပြည်တော်တွင်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဆက်လည်အတည်ပြုနိင်ဖို့ အတွက် မိမိတို့ ကွန်ယက်များမှ ထပ်မံစုံစမ်းစေလိုပါတယ်။ နဂျစ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြည်သူများကို ကယ်တင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအတွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိနေခြင်း။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်သားနှင့်အပေါင်းပါများကိုမှုးယစ်ဆေးဝါးမှု နှင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းများဟာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအတွင်းအကွဲပြဲများကို ပုံသဏ္ဍန်တမျိုးနှင့်ဖေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရပ်ကွက်သုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်။
– – – – -Far more frightening, for some, are rumblings within the junta. The referendum is not popular with all sections of the rulers, to go by some inside accounts.
Junta-watchers do not rule out sections loyal to SPDC Vice-Chairman General Maung Aye stagingarevolt, at an opportune time ahead, against Chairman Than Shwe, the 75-year-old senior General known to be suffering from acute diabetes and breathing problems. —-
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Politics, SPDC | Tagged: breaking news, Burma, Burma News, Junta, Maung Aye, Maung Aye arrested, Mg Aye, Myanmar, Myanmar coup, Myanmar news, News, Palace coup d'état in Myanmar, SPDC, Than Shwe, Than Shwe arrested Maung Aye, Vice Senior-General Maung Aye |	Leaveacomment »